Ziziphi iintsuku zeveki ezizaliseka ngayo amaphupha azaliseka?
Ngaba onke amaphupha asebenza ngokubaluleka kwexesha elizayo? Yaye ukuba baxela ngelixa elizayo, ziphi iiveki zeveki zizaliseka amaphupha?
Iphupha ngemini yeveki: ixabiso
Ubusuku ukususela ngeCawa ukuya ngoMvulo
NgoMvulo, elawulwa yiNyanga, ithathwa njengolu suku olunzima. Iingcamango eziye zacatshulwa ngobusuku beCawa ukuya kuMvulo, kungakhathaliseki ukuba umxholo, zixhomekeke kwiimeko zakho zentsapho kunye neengqondo kwaye ziyakwazi ukuhambelana nemicimbi yansuku zonke, iintsapho kunye nezihlobo, ikhaya, abantwana abancinci kunye nabasetyhini, kubandakanywa nomama. Umfutshane, ongenasityebi ebuthongweni bokuqukethwe ubonwa ngileyo - uya kuba nesimo sengqondo esifanelekileyo, ukuxinwa komntu kunye nokugxininisa, akuyi kuba ncinane. Kodwa ukuba iphupha loMvulo lomelele kwaye lide, kwaye kwakukho amanzi kulo - kuya kufuneka wenze umsebenzi omninzi wemihla ngemihla.
NgoMvulo ukuya ngoLibini
I-Mars enomlilo, eyenza izifiso kwaye inika amandla ekusebenzeni, ilandisa uLwesibili. Iingcamango ezibonwayo ngalo mhla zibonakalisa iiminqweno zakho neemfuno zakho. Njengombulunga wesilisa, iMars ithathwa njengeplanethi yamaqhawe, ngoko ke amaphupha aLwesibili aya kuxela ngamadoda aqhelekileyo, amahlazo kunye neemfazwe, eza okanye eza. Izinto ezibukhali, ziphupha ephupheni, zibonisa ukulungela kwakho ukwenza isenzo esisebenzayo. Iphupha eliqaqambileyo lithetha ukuba ngoku uzaliswe ngamandla obomi "kwi-brim." Ukuba iphupha likaLwesibili liye lazola, uze ulungisele amandla akho ngendlela ethile, ngokukhawuleza kwaye ujonge ngokukhawuleza naluphi na ubunzima obuvela kwindlela eya empumelelweni, kunye neentlungu ebomini bakho kwixesha elizayo azicwangcwanga. Ukuba iphupha eliphuphayo alibi, ngoko lithetha ngokuphakama kweeminqweno zobugovu nokuzithemba okukhulu.
NgoLwesibini - ngoLwesithathu
Ingqongileyo ilawulwa ngumlamli-mbambano weMercury. Isityebi, isityebi kwizifundo nangezenzo, iphupha lokusingqongileyo lithetha ngezakhono zakho zokunxibelelana. Kuwe kukuhle kwaye kulula ukuthetha, kungekudala uza kuba nabahlobo abatsha kunye nabo oya kuba nwabisa kwaye ulungile. Baya kuba nako ukunifundisa uninzi ngendlela engabonakaliyo. Ukuba unalo iphupha elililileyo, elibuhlungu, okanye uzaliswe ngeemeko ezingathandekiyo - kungekudala uzakufumana ukungabikho kolwazi, kwaye akukho mntu unokukunceda. I-Mercury emoyeni idla ngokugqithiseleyo, kwaye, kaninzi, iinguphu ezingalibalekiyo. Kodwa ukuba iphupha liyakhunjulwa - xa udibanisa uya kufumana ulwazi malunga nalabo odla ukuthetha nabo (abahlobo, abahlobo, abahlobo, izalamane).
NgoLwesithathu - ngoLwesine
I-planethi yentlalo i-Jupiter ixhomekeka ngoLwesine. Iingcamango ezithe zafika namhlanje ziya kuxela ngamathuba ozayo, umsebenzi, abaphathi bakho, abaxhasi, abacebisi kunye nabathathi. Ukuba ubonile ookhokho okanye imifanekiso yexesha elidlulileyo - ebomini kufuneka ufunde uqeqesho lwabazali bakho kwaye uqhubeke nomsebenzi wabo. Amaphupha oLwesine aya kuxelela ngemisebenzi engayiphumeza impumelelo, kunye nokuxazulula imiba enxulumene nobomi boluntu nentlalontle. Ukuba uzibonele ephupheni njengomntu othabatha inxaxheba kwisiganeko esikhulu, oku kukuphawu oluhle. Iphupha elinjalo kuthetha ukuba kungekudala uza kuphumelela kwimisebenzi yoluntu, kuya kufuneka uqhubele phambili ngokukhawuleza kwinqanaba lomsebenzi, kwaye amagunya aya kukuphatha kakuhle.
NgoLwesine ukuya kuLwesihlanu
NgoLwesihlanu ngumhla weplanethi yeVenus. Iingcamango zolu suku lweveki zibonakalisa iimvakalelo zethu kwaye, njengokuba zikholelwa ngokuqhelekileyo, zihlala zizaliseka, zihambelana nomnqweno onamandla wokwenza into. Iphupha liza kukuxelela malunga nexesha kunye neendlela zokuguqula into oyifunayo ebomini. Imifanekiso yale maphupha inxulumene nobomi bomntu, isikhundla sendawo kunye nobuchule. Ukuba ufumana imali ephupheni okanye into ethile, iimvakalelo zakho ziya kuyaneliseka, kwaye kungekudala awukwazi ukuzithintela nantoni na. Iingcamango esilahlekileyo okanye ezingenakufumana nantoni na, zithi ubomi bomntu buya kuba buhlungu, ngokukhawuleza kufuneka kuthintele iimfuno zayo, kwaye ukhuseleko lwamaxabiso luya kuba luncinane.
NgoLwesihlanu - ngoMgqibelo
NgoMgqibelo ngumhla weplanethi yezilingo, isiphephelo kunye nesiphelo - uSaturn. Usikhusela, utyhola imithetho, ngoko amaphupha kaMgqibelo asitshela ukuba singayithinteli, kwintoni ekufuneka siyibeke kuyo, yintoni imigaqo yokuthobela. Ngokuqhelekileyo la maphupha athetha malunga nethuba lokufezekiswa kocwangciso, ukulandelelana kunye nokuxhamla kweziganeko ezizayo. Ukuba iphupha libalabala - lithetha ukuba ubuninzi becwangciso luye lwazaliseka, kwaye izithintelo ezinzulu aziyikukusongela. Iphupha elimnyama nelomhlophe, iphupha elimnyama, apho iindonga ezide, izithintelo okanye iminqamlezo ibonakala, kubonisa ukuba izicwangciso ziya kuzaliswa kuphela emva komsebenzi onzima kwaye kungekudala akukho nto iya kunikwa lula. Iphupha likaMgqibelo lingachaza malunga nexesha lakho okanye abanye abantu.
NgeCawa yimini yeLanga, ehambelana neentshukumo zokuphefumlelwa, uthando kunye nobuchule. Iingcamango ezazicatshulwa ngobusuku boMgqibelo ukuya kwiCawa zisitsho into enokusenza sivuyiswe, sivelise iimvakalelo ezintle ebomini bethu. Ngobusuku ukususela ngoMgqibelo ukuya kwiCawa, kunokubakho imeko okanye abantu abazalisa ubomi bethu ngokukhanya, ukuzalisekisa ngezinto ezinomdla okanye, ngokuchaseneyo, ukufihla uvuyo lwakho. Iphupha elihle libiza umsebenzi osebenzayo wokudala kwaye uthi ngokukhawuleza uya kuba neengcamango ezintsha, kunye nolwazi olunolwazi olunamandla. Ukulala kunokuba ngumlenze wothando olunamandla okanye kukunceda ufumene italente eye yafihlakele kuwe ngoku.
Iinjongo zizaliseka ngaziphi iintsuku?
Zonke iiphupha ziya kubonakaliswa ngokwenene. Kodwa nini? Iphupha lizaliseka ngeentsuku ezithile zeveki. Uyazi njani luni na eli phupha liza kuzaliseka?
Unokufumana impendulo yalo mbuzo ngokuphendukela kwenkwenkwezi, ngokukodwa, kwiinkwenkwezi ezikhomba ezisixhenxe. Idibanisa iiplanethi ezisixhenxe, ibonise ubuhlobo phakathi kwabo. Iqiniso lokuba iphupha likaMvulo liya kuzaliseka ngoLwesine okanye ngoLwesihlanu (mhlawumbi nangona xesha) kuthetha imigca emibini eqondekileyo, ephuma kwi-patroness yoMsombuluko-inyanga ukuya kuJupiter, umphathi weLwesine, kunye noVenus, edibene noLwesihlanu. NgoMgqibelo okanye ngoLwesihlanu, umntu kufuneka alindele ukuphunyezwa kwephupha likaLwesibili - iMars. Iingcamango zendalo zifikeleleka ngeSabatha, ngomhla kaSatan, okanye ngeCawa, usuku lweLanga, kuba kubo baqondiswa ngokubini kwi-Mercury.
Kulula ukongeza kwixesha apho iphupha lenzeke khona, iintsuku ezi-4, ngoko ke ukufumana uhlobo lwetafile ukuzaliseka kwamaphupha. Ukuba iphupha labonakala ngoMsombuluko - liyafumaneka ngoLwesine. Ukuba NgoLwesibini - kuza kuzaliseka ngoLwesihlanu. Ukuba ngoLwesithathu - uya kuza kulunge ngoMgqibelo. Ukulala ukususela ngoLwesine kuya kuLwesihlanu kuzaliseka ngomhla wokugqibela weveki, ngeCawa. Ukuba iphupha liphupha ngoLwesihlanu - liya kuzaliseka ngoMvulo, njl.
Ukubona igazi ephupheni ephupheni, oko kuthetha ntoni?
Yintoni iphupha ekuboneni ikhephu
Ukubulala umntu: indlela yokutolika eli phupha?
Kuthetha ukuthini xa bafuna ukubulala ephupheni?
Lahleka umntwana ephupheni
Indlela yokubukeka imncinane kuneminyaka yakhe kwindoda engama-30 +
Ii-cookies zesiDanish zeHindbrsnitte
Iimfestile eziphathekayo 2014: izitayela zangempela, imibala, ukuhlobisa